Posted By: KongoLisolowaa: Juun 29, 2019 00: 30 No Comments
Munaasabaddan oo aan caadi ahayn, oo ka dhacday munaasabad gaar ah taariikhda xiriirka Belgium-Congolese, ayaa sameeyey bogga hore ee toddobaadka. Intii lagu guda jiray shirkiisa, waxaa muwaadiniin Belgian ah lagu soo bandhigay warbaahinta ra'iisal wasaaraha Lumumba oo ah basaas u adeega dalkiisa.
Nasiib darro, aqoonsigiisa lama shaacin. Ma garanayno halka, goorta iyo sida loo qabtay. Waa maxay qaddarkiisu?
War saxaafadeedka Belgian, oo shaqaaleysiiya shuruucda midab-takoorka iyo gumeysiga ee munaasabadda, waxa uu ku rajo weyn yahay inuu mar uun ku dhajiyay dukaanka. Halkii odhan lahaa "Congolese" Habeenkii Sawir qaade ayaa door bidaaya ereyga "Madoow" kaas oo badanaa la adeegsaday xilligii gumeysiga.
Qoraalka ku soo qoray wargeyska baaskiilka ayaa ah mid gaaban oo aan wax faahfaahin ah ka bixin kiiska.
Waqtiga waxtarka, xiriirka ka dhexeeya Léopoldville iyo Brussels waa xun yihiin; Xiriirka ka dhexeeya Lumumba iyo dowladda Belgian waa mid la fulin karo.
Congo, oo madaxbannaan muddo laba bilood ah, ayaa ku jirta qarka ujuurada iyo wareerka sare ee sare ee gobolka.
Sep29 04: 32